उत्कृष्ट आइसक्रिम छैन कुरा हो कि जर्मनी धेरै साथीहरूले. तथापि, Ballabeni आइसक्रिम यसको अविश्वसनीय scoops संग परिवर्तन गर्न यहाँ छ. यो उत्कृष्ट आइसक्रीम पार्लर आइस म्यूनिखमा अवस्थित छ र यसका बारे निम्न जानकारीहरू छन्. को पार्लर जियोर्जियो Ballabeni पर्छ, आइसक्रिम बनाउने कला मा एक grandmaster. उहाँले एक शौक रूपमा आइसक्रिम सुरु, र म्यूनिख सबै यसको लागि आभारी छ. धेरै पर्यटकहरु र स्थानीय पसलमा प्रेम, यो अविश्वसनीय समीक्षा छोडेर. जब तपाईं आफ्नो आइसक्रिम प्रयास, यो किन हेर्न गाह्रो छैन. तिनीहरूले पूर्णता आफ्नो शिल्प honed र आफ्नो क्षेत्रमा सबै भन्दा राम्रो को एक गर्दै छन्. आफ्नो आवेग हरेक scoop मा मार्फत आउँछ. थप बोनस तिनीहरूले आइसक्रिम ट्रक र निजी पार्टीहरूलाई खानपानको प्रबन्ध गर्नु सक्नुहुन्छ!
के तपाईं कहिल्यै हंगेरी को राजधानी मा आफैलाई मिल गर्नुपर्छ, बनाउन भ्रमण गर्न निश्चित Gelarto रोजा. यो अचम्मको आइसक्रिम स्टोर छ बुडापेस्ट को हृदय. तिनीहरूले परम्परा बारेमा सबै छन्, घनिष्ठता, रोमान्स, र आवेग, जो आफ्नो काम देखिने छ. अर्को शब्दमा, तिनीहरूले क्षेत्रमा साँचो विशेषज्ञहरु छन्. तिनीहरूको आइसक्रिम सम्म, उनीहरूले मात्र उत्कृष्ट जैविक सामाग्री प्रयोग सुन्न खुसी हुनेछन्. हरेक ठूलो आइसक्रिम पसल कृत्रिम आइसक्रिम तिरस्कार. तथापि, के बनाउँछ Gelarto रोजा अद्वितीय एक गुलाब मा आइसक्रिम आकार दिन आफ्नो कालिगढ दृष्टिकोण छ. तपाईं एक हट दिनमा Szent Istvan वर्ग मा कहिल्यै छन् भने, तपाई निश्चित रूपले गुलाब आकारको आइस क्रिमका साथ धेरै मानिस हिडिरहनु भएको छ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ स्थान आइसक्रीम युरोप मा खान” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-eat-ice-cream-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)